warbixin: Mileteriga Mayanmaar oo dilay 75- caruur ah | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
warbixin: Mileteriga Mayanmaar oo dilay 75- caruur ah
Guddiga xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa jimcihii sheegay inay heleen macluumaad lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in 75 carruur ah la dilay ku dhowaad kun qof oo kalana la dhigay xabsiyada Myanmar tan iyo 1-dii Febraayo.
Guddiga xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay, in shantii bilood ee la soo dhaafay mileteriga Mayanmaar ay dalka galiyeen qalalaaso siyaasadeed,taasina ay u dheer tahay xaalad deg deg ah oo uu keenay cudurka faafa ee COVID-19.
Warbixinta aya lagu yiri “Carruurta waxay la kulmaan rabshado aan kala sooc lahayn, toogasho aan kala sooc lahayn iyo xarig aan loo meel dayin maalin kasta,”.
Mudaharaadyo waawayn oo ay dhigayaan dadka Mayanmaar ayaa ka socda magaalooyinka dalkaasi,laakiin waxay la kulmeen jawaab militari oo aad u daran tan iyo afgambigii xukunka looga tuuray hogaamiyihii rayidka Aung San Suu Kyi.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo soo dhaweeyey Jadwalka doorashooyinka ee ay soo saareen Guddiga Hirgelinta doorashada
Next articleHawlgalo lagu baacsanayo Argagixisada Al-shabaab oo ka socda Koonfurta Mudug